Mareykanka oo si aan la fileyn uga hadlay rabshadaha Ethiopia - Caasimada Online
Home Warar Mareykanka oo si aan la fileyn uga hadlay rabshadaha Ethiopia
Mareykanka oo si aan la fileyn uga hadlay rabshadaha Ethiopia
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Mareykanka ayaa si yaab leh kaga hadashay rabashadaha ka socdo dalka Ethiopia oo ka dhacaya qaar kamid ah gobolada dalkaasi, kaasi oo looga soo horjeedo xukunta qowmiyada Tikreeda.
War qoraal ah oo kasoo baxay dowlada Mareykanka ayaa lagu sheegay iney ka xun tahay dibadbaxyada ka dhacaya dalka Ethiopia oo ay dhigayaan qowmiyadaha ku kacsan dowlada.
Qoraalka oo kasoo baxay safaarada Mareykanka ee dalka Ethiopia ayaa lagu sheegay in dowlada Mareykanka ay cambaareyneyso banaanbaxyada rabashadaha wata oo ay dhigayaan Oromada iyo Amxaarada oo ay kaga soo horjeedaan xukunka Tikreeda.
Dowlada Mareykanka ayaa qoraalka ay soo saartay waxay ugu baaqday dowlada Ethiopia iney yareyso khasaaraha ka dhalan kara dibad baxyada dalkaasi ka dhacaya, waxaana qoraalka laga dareemi karaa iney la safan tahay dowlada Tikreeda hogaamiso ee lagu banaanbaxayo.
Dibadbaxyada, ayaa ka dhacay gobolada Oromia iyo Amhara oo ay ku nool yihiin labada qowmiyadood ee dalka ugu badan. Siyaasiyiinta Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in tiro dad ah la dilay.